ဘ၀ခရီးတစ်ခု၏ ခံစားမှုပုံရိပ် မှတ်တမ်းလေးများ (လင်းလက်ကြယ်စင်): ကျမကိုယ်ကျမမုန်းသောအချက်များ
Nomatter what, I really love your habits and mind you mentioned.
လင်းလက် ပေါက်ကွဲနေပါလား။ စိတ်လျှော့ပါ၊ အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေ။
ညီမလင်းလက်။ ကိုယ့်လုပ်ရပ်တွေဟာ စေတနာဆိုးနဲ့ တမင် လုပ်တာမျိုးမဟုတ်ရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘာလို့မုန်းနေတော့မှာလဲ နော်။
lin chit sone lay
no need to hate ur self. miss u heaps
အမုန်းဆိုတာ သူများကို မုန်းတာပဲ ဖြစ်၂ ၊ ကိုယ့်ဘာသာ မုန်းတာပဲ ဖြစ်၂ အရမ်းပင်ပန်းပါတယ် ။ အမလည်း လင်းလက်လို ခံစားချက် လင်းလက်အရွယ်တုန်းက ရှိခဲ့တယ် ။ လျှော့ချလိုက်ပါ ညီမ
Ang Mokio တွင်ထုတ်လုပ်သည် said...
It's like modern art.Great.....